DHAGEYSI XASAASI AH: Taliyaha Booliska PL oo loo haysto Tacadiyo iyo dilal ay geysteen Ilaaladiisa gaarka ah.
Magalaada Bossaso waxaa todobaadyadii la soo dhaafay ay la kowsatay tacadiyo ka baxsan xuquuqda aadanaha, ayna gaysteen qaybo kamid ah hoggaanka Ciidamada Booliska Puntland.
Tacadiyada ayaa isugu jiray xarig maxaabiis la xirtay maxkamad la’aan, ayadoo xabsiga loo taxaabay dhallinyaro ka badan labaataneeye. Dhallinyarada oo laga wada qabtay magaalada Bossaso ayaan marna maxkamad la horkeenin, danbina lagu soo oogin, waxaana bilaa xukun maxkamad loo dhaadhiciyey gaalshiraha weyn ee Bossaso.
Dhammaan dhallinyaradaas labaataneeyaha ah waxaa lagu soo xiray amarka Taliyaha Booliska Puntland Janaraal Muxyadin Axmed Muuse, waxaana soo xiray ciidamada gaarka ah ee Taliyaha.
Dhallinyarada qaarkood oo ka gaabsaday in ay hadda waraysi siiyaan Radio Daljir ayaa nala qaybsaday in qaar kamid ah dhallinyarada ay ciidamada gaarka ah ee Janaraalku gooni ula baxeen, una geysteen jirdil aad u daran, sababayna geerida mid kamid ah dhallinyaradaas.
Wiilka dhallinyarada ah ee u geeriyooday jirdilka daran ee ay u geysteen ciidamada gaarka ah ee Janaraal Muxyadin Axmed Muuse ayaa markiisii hore loo soo xirey tuhun la xiriira in uu ka tirsanyahay kooxaha argagaxisada ee ku dhuumaaleysta Puntland. Wiilka oo aan illaa iyo hadda lagu helin dambi la xaqiijiyey, sida naloo xaqiijiyeyna loo jirdiley si uu u qirto dambigaas, ayaa asaga oo aan waxba qiran waxa uu ku dhintay xeebta magaalada Bossaso oo ahayd goobtii lagu jirdilayey.
Maxbuuska oo geeriyooday asaga oo la jirdilayo kuna geeriyooday xeebta Bossaso ayaa magaciisa la oran jiray Axmed Maxamed Xaaji Aadan Abokar, kuna dhashay Awdhiigle.
Dhimashada maxbuuska kabacdi ayaa waxaa la ogooday in dhallinyaro labaataneeye ahi ay maxkamad la’aan ku xiranyihiin gaalshiraha Bossaso, markaas kabacdina waxaa dhacdooyinka soo faragaliyey Hay’adda Madaxbannaan ee Xuquuqda Aadanaha Puntland.
Dhacdooyinka ciidamada gaarka ah ee Janaraalku kuma eka dhacdada kore oo kaliya, ee waxaa qaar kamid ah dhallinta la xirtay Radio Daljir la qaybsadeen in xataa maxaabiista maxbuus kamid ahi gaari uu hanti ka lahaa ay ka qaateen ciidamada Janaraalku, intii uu xirnaana ay si xarrago leh ugula dhex mushaaxi jireen magaalada Garoowe (Dhacdadaas oo ayana dhammaystiran kala soco Radio Daljir).
Haddaba, ayada oo maanka lagu hayo dhacdooyinkan ugubka ku ah Puntland, ayna ka warheleen Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka Puntland, ayaa magaalada Garoowe waxaa maalmahaan ka socday kulamo lagu gorfaynayey sidii awoodaha saraakiisha Booliska loo xaddidi lahaa, loona suuliyo awood ay maxaabiis aan danbi lagu helin ugu dhaadhiciyaan xabsiyada waaweyn ee Puntland.
Radio Daljir oo dabajooga falalkan gurracan ee ciidamada ammaanka ee haddana sharciga ka baxsan ayaan waxa aan ka waraysanay Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee shanta gobol ee Bari, Nugaal, Karkaar, Haylaan iyo Gardafu Cawil Axmed Faarax.
Guddoomiyaha oo ka gaabsaday in uu ka hadlo kiiska maxbuuska si jirdil ah dilka loogu geystay xeebta Bossaso ama kan hantidiisa laga dhacay, ayaa haddana waxaa uu muujiyay sida ay Puntland maanta caado uga tahay in qof madax ahi qofkii uu doono oo xataa aan waxba galabsan, oo aan maxkamad la marin, uu xabsiga ugu haysan karo.
Wasiir katirsan Xukuumadda Puntland oo runta ka sheegay xaaladda Xaduudaha Puntland.
XOG: RW Kheyre oo Is karantiilay 14 maalmood mudo ku siman & M/weynaha oo ku amray talaabo cusub.
DAAWO VIDEO:Muuse Biixi oo xaqiijiyey Qorshaha RW Abey ee Raysal wasaare Khayre Ku tagayo Hargeysa Iyo wada Hadalada.
XOG: Is heysi ka jira gudaha Madaxtooyada Puntland, Agaasimihii Guud oo shaqada iskaga tagay & Walaac soo baxaya.
Amarka Puntland ee xirida Xaduudaha oo aan hirgalin.
Wakhtiga la aasi doono marxuun Nuur Cadde oo la shaaciyey
Madaxweyne Farmaajo oo caafimaad u rajeeyey RW Boris
Dawladda Soomaaliya oo qaadaysa talaabooyin dheerad ah oo la xariira kahortagida Xanuunka Corone-Virus.
Dhimashada Corone-Virus oo sii kordhaysa, 24 saac ee lasoo dhaafay
Madaxda ugu saraysa Sacuudiga oo is karantiilay